Dr. Tediroos Adhaanoom hoogganaa WHO ta'ee filatamuun xiyyeeffannaan mirga namaaf laatamu xiqqaa ta'uu agarsiisa - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Dr. Tediroos Adhaanoom hoogganaa WHO ta’ee filatamuun xiyyeeffannaan mirga namaaf laatamu xiqqaa...
Dr. Tediroos Adhaanoom hoogganaa WHO ta’ee filatamuun xiyyeeffannaan mirga namaaf laatamu xiqqaa ta’uu agarsiisa
Filatamuun isaa maqaadhaaf malee faaydaa fi miidhaan inni qabus hin jiru. Qabsoon itti fufa!
Filannoo hoogganaa WHO (Dhabbata Fayyaa Mootummoota Gamtoomanii) guyyaa har’aa Jenevaa, Siwiizerlaanditti geggeeffameen Dr. Tediroos Adhaanoom moo’ate. Teediroos filannoo kana marsa 3ffaa irratti kan moo’ate.
Tedroos sadarkaa addaddatti nama sirna mootumma Woyyaanee tajaajilaa tureedha. Yakka Oromoo fi saboota biraa irrati raawwatame keessaa harka qaba jechuudhaan namoonni heddu hoogganaa WHO ta’uudhaaf kaadhimamuu isaa mormaa turaniiru. Mormiin ummataa kuni bakka bu’oota Afrikaa fi biyyoota biraa galma UN Jenevaa jiru keessatti wolitit qabaman biratti dhageettii fi fudhatama osoo hin argatin hafuu isaati kan Tediroos akka filatamu taasise. Namoonni Tediroos filatan, afaaniin yoo hin taane, dhugatti mirga namaaf dantaa kan hin qabne ta’uu isaanii ragaa ufitti bayaniiru.
yeroo dheeraadhaaf WHO (Dhabbata Fayyaa Mootummoota Gamtoomanii) namoota ardii Awurooppaa, Ameerikaa fi Aasiyaa irraa ta’antu hoogganaa ture. Afrikaa irraa namni hanga har’aatti dhabbata kana hoogganee hin turre. Yeroon ykn hireen ammaa kan Afrikaati yaanni jedhu jabaataa dhufuu isaati kan moo’achuu Tediroosiif balbala bane jedhu taajjabdoonni.
Tediroos hoogganaa WHO ta’uun isaa mallatoodhaaf (maqaadhaaf) yoo ta’e malee faaydaa inni daegartootaaf, akkasumas balaan inni mormitoota irraan gayu hedduu miti. Sababni isaas WHO dhaabbata seeraan masakamu malee kan hooganaan akka fedhetti haajaa ufiif, fira badhaasuu fi mormituu dhabamsiisuudhaaf, dhimma itti bayu waan hin taaneef.
dhaabbata fayyaa mootummoota gamtoomanii
Previous articleHariiroon Eertiraa fi Masrii cimaa dhufuun Itoophiyaa yaachisuu hin qabu jetti Eertiraan
Next articleAmeerikaan lammiilee isii gara Itoophiyaatti imalan akeekkachiiste